REPORTERS NEPAL « रिपोर्टर्स नेपाल
अब पनि महाधिवेशन सारे राम्रो हुन्नः नेता श्रेष्ठ
काठमाडौं, साउन ३१ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठले अब पार्टीको महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने ठोकुवा गरेका छन् । पटकपटक महाधिवेशन सर्नुमा नेतृत्वको
“महाधिवेशनमा हारेका माधव नेपालले बीचमा अध्यक्ष हत्याउन खोज्ने ?”
काठमाडौं, साउन ३१ । नेकपा एमालेका परराष्ट्र विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले युग सुहाउँदो चेतनामा आधारित भएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सीमा व्यवस्थापनलाई प्रविधिसँग जोडेर दुवै
“नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछौं”
काठमाडौं, साउन ३१ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने बताएका छन् । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शु्भकामना दिँदै यादवले दुई छिमेकी देशबीच देखापरेका
भारतसँग सन्तुलित र स्वस्थ सम्बन्ध राख्छौंः डा. महत
काठमाडौं, साउन ३१ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्वपरराष्ट्र राज्यमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबैभन्दा नजिकको छिमेकी र खुला सीमाका कारण नेपाल र भारतबीच केही समस्या देखिए पनि अब विश्वासमा आधारित
“विगतको अपरिपक्वताले नेपाल–भारतको सम्बन्धमा केही समस्या देखिए पनि अब कूटनीतिक समाधान हुन्छ”
काठमाडौं, साउन ३१ । पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले विगतको सरकारले परारष्ट्र नीतिमा विश्वसनीयता देखाउन नसकेकाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही समस्या देखिएको बताएका छन् । परराष्ट्रमा अपरिपक्वता र दोधारे चरित्र देखाउनुको परिणाम
लुम्बिनी प्रदेशका जनतालाई खुसी र समृद्ध बनाउने कार्यक्रम ल्याउने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीको उद्घोष
काठमाडौं, साउन २९ । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जनतालाई खुसी र समृद्ध बनाउने कार्यक्रम ल्याउने उद्घोष गरेका छन् । छिट्टै विश्वासको मत लिएर लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको स्पिरिटमा
दसैं–तिहार मनाएर मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन गर्छौं: साउद
काठमाडौं, साउन २९ । नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले पार्टीको चौधौं महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुने बताएका छन् । नेता साउदले अब पूर्व कार्यतालिका अनुसार भदौ १६ बाट महाधिवेशन हुन सक्ने
संसदबाट एमसीसी पारित हुन दिन्नौंः माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेल
काठमाडौं, साउन २९ । नेकपा माओवादी केन्द्र लीलामणि पोखरेलले अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । पोखरेलले एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितको अनुकूल नभएको दाबी गरे
बालुवाटारमा देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक, होटलमा ३५ जिल्ला सभापतिको भेला
काठमाडौं, साउन २८ । नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको रणनीति तयार गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालु्वाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक जारी छ भने
भदौमै वडा अधिवेशन सुरु गरी ४६ औं दिनमा केन्द्रीय सभापति चुन्ने कांग्रेस महाधिवेशनको नयाँ तालिका आउने
काठमाडौं, साउन २८ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौमा पार्टीको वडा अधिवेशन सुरुवात गरेको ४६ औं दिनमा केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन हुने गरी नयाँ महाधिवेशन तालिका दिएको छ । केन्द्रीय
लुम्बिनी प्रदेशमा आज नयाँ सरकार बन्छ, विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौंः सांसद राना
काठमाडौं, साउन २८ । नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद वीरबहादुर रानाले आज प्रदेश सरकारले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने र विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनका
अब देउवा र पौडेललाई विश्राम दिनुपर्छ: नेता भण्डारी
काठमाडौं, साउन २८ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले अब शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको नेतृत्व अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उमेर, समय र परिवेश हेरेर